शिवानीसिंह थारू - कान्तिपुर समाचार
शिवानीसिंह थारूका लेखहरु :
एक सर्को बास्ना
प्रस्तावनाप्रेमको आलिंगनमा पहिलोपटक जकडिइँदा के मैले दाँजेकी थिएँ प्रेमीको गर्दनबाट सुवासिएको मांसल बास्ना र बुबाले लगाउने ‘कियो कार्पिन’ केशतेलको सुगन्ध हल्का ? लेखिका आँखा चिम्लेर सम्झिने प्रयास गरिरहेकी थिई । नाकको पोरा फुलाउँदै हरेक सासमा सुवासीय स्मृति खोजिरहेकी थिई ।
भूमिकातपाईंले ठीक बुझ्नुभयो ! यो शीर्षक कविशिरोमणि लेखनाथ पौड्यालकृत ‘ऋतु–विचार’ खण्डकाव्यकै हो । ‘ऋतु–विचार’ को पछिल्तिर ‘२.०’ थप्ने धृष्टता सायद मैले गर्दैनथें होला यदि यो कोरोनाकालमा नपढेको भए ।
मध्यमवर्गीय दुःखहरू शास्त्रीय अर्थमा बुझिएको ‘दुःख’ को कोटीमा पर्दैनन् । त्यसैले सायद नेपाली साहित्यमा मध्यमवर्गीय दुःखका ‘दुःखभरि’ कहानी भेटिँदैन । मध्यमवर्गीयका कथा ध्रुवचन्द्र गौतमले नै धेरै लेखेका छन्, त्यो पनि व्यङ्ग्यात्मक ध्वनिमा । सायद मध्यमवर्गीयहरूको दुःखजिलो हास्य र व्यङ्ग्यमै ठीक सुनिने गर्छ । यसो हो भने यसको सौन्दर्य पनि यही हो र दुःखान्त पनि । खैर, त्यही सही !
विक्रम संवत् २११७आजभन्दा सय वा डेढ सय सालअघि यो चिठी लेखिएको भए यसको सुरुआत माफीबाट हुने थियो । केही यसप्रकारले– ‘प्रिय संसारा माफ गर्नु तिम्रो चिठी अबेर गरी पाएँ । जवाफ दिन त्यसैले ढिला भयो ।’
धेरै–धेरै वर्ष पहिले ...एकादेशमा बाल्यकाल थियो, म थिएँ र तिनटा अजंगका ‘डर’ थिए । आकाशमा मान्छेका छाया डढाउने सूर्य उदाउँथ्यो, हावामा ‘लू’ हुनहुनाउँथ्यो, मध्याह्नपछि एकजोर आँखा डराई–डराई ढोकाको चरबाट बाहिर चियाउँथ्यो । यो डरको कथा हो ।